Mid Ka Mid Ah Caruurtii Mudaharaadaysay Ee Ay Jeegaantu Ku Dishay Magaalada Burco Dhawaan… Mid ka mid ah dhiigii loogu wanqalay Muuse Biixi - somalilandlivemedia
21:39 2. December 2017
ILA WADAAG DAREEN.
Adduunyada guud ahaan doorashooyinka ka dhacaa waxay Bulshooyinka ku keenaan kala qaybsanaan iyo dildilaac maadaama ay kala raacaan Axsaabta loolamaysa. Baaxada kala qaybsanaantaasi leeg tahay waxay ku xidhan tahay arrimo fara badan oo sahla ama adkeeya in xal loo helo marka la kala guulaysto kuwaasoo aad u faro badan laakiin aan ka xusi karo intan hoose.
– Kalsoonida ay Bulshadaasi ku qabaan Musharaxiinta loolamaysa iyo qiimaynta sooyaalkooda shakhsi, sumcadooda, garashadooda, aqoontooda hogaamineed, siyaasadeed iwm.
– Qaab dhismeedka Bulshadaasi iyo fahamkooda dawladnimada ay ka haystaan.
– Sooyaalka taariikheed ee waxa Bulshadaasi ka dhaxashay dawladnimada.
– Baaxada tabashooyinka ka dhex jira Bulshadaasi iyo baahida ay u qabaan isbedel dhaca.
– Hufnaanta iyo daahfurnaanta nidaamka doorashada lagu gelayo iyo masuuliyada, caddaalada iyo dhexdhexaadnimada cidda kala saaraysa.
– Kalsoonida Bulshadaasi ku qabto in Garsoorkoodu yahay mid dhexdhexaad ah oo u noqon kara marjac marka khilaaf yimaado.
– U sinnaanta dheefta dawladnimadu leedahay cidkasta oo ku guulaysataba.
– Dhexdhexaadnimada Warbaahinta Qaranka iyo in Axsaabtu si isku mid ah u isticmaali karaan Warbaahinta.
– Ilaalinta xoriyatul qawlka iyo xuquuqda Aadamaha.
Arrimahaas iyo in kale oonan halkan ku soo koobi karin markaan qiimeeyay dhammaantood way inaga khaldan yihiin, waxaanay sii xoojinayaan dildilaaca Bulshadeena doorashadani ku keentay. Haddaan eray eray kooban ka idhaahdo qodobadaasi laga yaabaa inaad dulucda ila fahamto:-
Muuse Biixi – oo ah Musharaxa loo cimaamaday waa nin ku suntan hurinta colaado sokeeye iyo kala qaybin Bulsho islamarkaasna leh fal dembiyeedyo uu galay (criminal record). Shacabka reer Somaliland in badan oo ka mid ahina Kalsooni kuma qabaan.
Bulshadeena Waxaa ku xoog wayn Qabiilka oo Qaranimada ka xoog badan waxaanay u baahantay Madax ka koran Qabyaalad, nasiibdarro Muuse Biixi iyo Xisbiga Kulmiyeba waxay naaxiyeen qabyaaladii taasi oo ku abuurtay Bulshada Somaliland kala aamin bax isa soo taraya. Waxaa koray sadbursiga ku salaysan qabiilka.
Waxaan kalsooni badan Bulshadu ku qabin dhexdhexaadnimada Garsoorka iyo Warbaahinta oo labadaba ay Xukuumada Kulmiye keligeed u adeegsato siday doonto.
Waxaa jira musuq hantiyeed iyo mid qabyaaladeed oo aad u koray muddadii Xisbiga Kulmiye talada hayay.
Arrimahaas haddii aanu Muuse Biixi wax ka bedelin Waxaa ii muuqata in Somaliland hayso dhabihii burburka islamarkaasna ay lumi doonto aaminaada ay Bulshada reer Somaliland isku qabto.
Waxaan xasuustay Warbixin uu Suxufi Ingiriis ahi qoray oon 1988 kii ka akhriyay Jariirada “The Independent” ee dalka Ingiriiska kasoo baxda. Wakhtigaas Xukuumadii Siyaad Barre oo xasuuq ku haysay deegaano ka tirsan Somaliland wuxuu ka mamnuucay Saxaafada Caalamiga ahi inay wax ka ogaato oo dalka soo gasho. Suxufigaasi wuxuu si dhuumasho ah uga soo talaabay Xadka Djibouti. Wuxuuna Saadaaliyay in Xukuumadii Siyaad Barre oo markaas weli Hargaysa SNM ka saartay laga guulaysan doono oo ay dhici doonto. Hase yeeshee wuxuu sidoo kale saadaaliyay in ay muddo aad u dheer qaadan doonto in dawlad Soomaaliyeed la helo maadaama buu yidhi ay luntay kalsoonidii Shacabka Soomaaliyeed isku qabay. Wakhtigaas hadafka SNM iyo shacabka reer Somaliland midkoodna kumay fikirahayn Gooni Isutaaga Somaliland.
Sidii uu saadaaliyay ayay u dhacdayoo ilaa maalinkaa maanta ah Dawlad Soomaaliyeed lama hayo, kala shaki iyo is-aaminaad la’aanina waa u saldhig.
Siilaanyo iyo Xukuumadiisa Kulmiye waxay beertay Qabyaalad, eex, Nin jeclaysi, sadbursiimo qabyaaladeed iyo kala shaki ay dhex dhigtay Bulshada reer Somaliland.
Bal aan eegno Muuse Biixi oo criminal record hore lihi inuu arrimahaas wax ka bedelo iyo inuu jidka burburka ku sii joogo.
Anigu hambalyay maayo waayo kumuu soo bixin sifo xalaal ah haday tahay Xisbiga Kulmiye dhexdiisa iyo hadday tahay doorashadan hadda lagu dhawaaqayba laakiin waxaan leeyahay shacabkayga u sabra oo ka dhursuga wuxuu la yimaado. Hambalyada waa inuu horta kasbadaa.
Daawo Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Mohamed Kahin Ahmed Oo Markii U Horaysay soo Kormeeray Xarumaha Ciidanka Booliska Somaliland
Newer Post Wasiirka Arimaha Debeda ee Somalia ayaa Jawaab Cad kabixiyay Saluug kadhashay Hab Maamuuskii Madaxwaynaha Somalia loogu Qaabilay Dalka Kenya
Older Post Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa? Qaybta 3’aad